Ikhaya elimangalisayo eKukljica eline-WiFi namakamelo okulala ama-2
U-Novasol unokuphawula okungu-45 kwezinye izindawo.
Lawa mafulethi anefenisha enethezekile anamasimu abanzi atholakala eduze komgwaqo kanye nemizuzu nje ukusuka kwelinye lamabhishi amahle kakhulu kulesi siqhingi. Njengoba ikude nokuphithizela kwedolobha, le ndawo ilungele ukuhamba ngezinyawo isikhathi eside. I-Kukljica iyidolobhana elihle eliseningizimu-mpumalanga ye-Ugljan Island futhi livame ukubizwa ngokuthi isango eliya e-Park Telascica kanye ne-National Park Kornati ngenxa yemvelo yayo engenasici.
Amabanga: indawo yokuhlala eseduze 20 m / ukuyothenga 350 m / indawo yokudlela 400 m / idolobha eliseduze(Zadar) 13 km / amanzi(Sandy beach) 1 km
Hlola ezinye izinketho ezise- Kukljica namaphethelo